Badge Logo Metal Momba ny fiara avo lenta miaraka amin'ny traikefa 25 taona sy ISO Cert, Shina marika marika metaly fiara avo lenta miaraka amin'ny traikefa 25 taona sy mpanamboatra ISO Cert, mpamatsy, orinasa lehibe - Mahery kokoa hatrany
Home>Products>Ho an'ny Auto>Tandindona fiara
Badge logo metaly fiara ambony kalitao miaraka amin'ny traikefa 25 taona sy ISO Cert
Ny karatra sy marika dia samy hafa amin'ny endriny sy fomba ary habe rehetra. Matetika vita amin'ny plastika (ABS), Zinc Alloy, na aliminioma.
Izy ireo dia fomba tsara hanasongadinana ny sary famantarana na ny sarinao ary ho tsara endrika.
Ny vokatra rehetra dia namboarina.
Kilasy Auto any ivelany
Fametahana Chrome 24h-72h
Afaka maharitra 3-5 Y
Mety haharitra 5-7 Y ny sasany
Tsy misy Burr On Edge
Dome (tsy voatery)
Tsy misy bubble tsy misy Scratch On
Mpitondra Souvenir mpivarotra antsinjarany
Lakaoly 3M (Tsy voatery)
Mahafeno fepetra ho an'ny vatan'ny fiara
30 * 20cm
1570000 Piece / Month
Ao anatin'ny 10-28 andro aorian'ny nanamafisana ny filaminana
5-7 andro eo ho eo
Kitapo OPP na vahaolana namboarina
Mahatsiaro anao izahay! Fa inona no hoeritreretinao raha nilaza taminay ianao hoe Ever Greater® afaka manolotra anao vidiny lafo amin'ny fanontam-pirinty lehibe any Shina tsy misy olana amin'ny fifandraisana-isaky ny mandeha! Heverinay fa hiteny ianao hoe, "Eny, azafady!"
Ity misy topy maso kely amin'ny rafitry ny fanarahan-dalàna; tianay ny hiantsoana azy io hoe «Audit audit». Na dia misafidy ny hiara-miasa amin'ny mpamatsy hafa aza ianao, dia mbola afaka manampy anao hahita vady azo antoka ity lisitra ity.
Manome fanontana matihanina maimaimpoana sy fanoloran-tena amin'ny plastika izay misy famakafakana feno momba ny faritry ny vokatra toy ny fampiasana, ny fiainana ara-nofo ary ny tsingerin'ny fiainana. Ity famakafakana ity dia voamarina miaraka amin'ny vahaolana lafo vidy isaky ny teti-bolanao mamonjy fotoana, vola ary angovo.
Izahay dia manohy mamolavola sy mamatsy fitaovana vaovao sy teknika famokarana ahafahanay mamokatra vokatra avo lenta kokoa amin'ny fitaovana rehetra amin'ny vidiny mora vidy miaraka amin'ny fiheverana ny tontolo iainana faratampony. Ho fanampin'ny tolotra amin'izao fotoana izao ao amin'ny tranonkalantsika sy brochure, dia raisinay ny soso-kevitrao hampiasa fitaovana sy teknolojia vaovao. Raha tsy mbola manana izany izahay dia afaka manome izany ho anao!
Ny loharanom-pahalalana sasany dia loharano efa niasa mialoha izay mametra fatratra ny fahafaha-manaingo azy. Miara-miasa amin'ny akora izahay mba hitazomana ny fahaiza-manao faratampony amin'ny fanovana ny pro-cess.
Nahita ny vokatra mety amin'ny vidiny mety, fa raha mividy sekely 20,000 XNUMX ianao! Tsapanay ny fanaintainanao! Ary izany no antony namelabelaranay ny fizotry ny famokarana sy ny logistics postage izay afaka manome kalitao miavaka sy fahombiazan'ny vidiny na dia ambany aza ny MOQ. Mandrakizay® manompo mpanjifa lehibe sy kely mitovy-tongasoa eto daholo!